Ungasarudza sei chikwereti chechikoro?
Fashion Style Zvidzidzo
Pamberi pekutanga kwegore rechikoro, vabereki vane zvinetso zvakawanda zvine chokuita nekutenga zvipfeko zvechikoro, shangu nezvimwe zvinhu. Kunyatsoteerera kunofanira kubhadharwa pakusarudza chikwata chechikoro, nokuti ichi ndicho chinhu icho mwana achapfeka paari pachake zuva rega rega. Chokutanga pane zvose, yeuka kuti inofanira kuva yakanaka, yakasimba uye inoshanda. Tinokupa iwe kuti uzvizive nezvimwe zvinhu zvinozobatsira vabereki kubata basa.
Nzira yekusarudza bhiza rakakodzera sei?
Hazvifananidzi kuoma, sezvo ichazadzwa nehuwandu hwe2 kilograms kana kupfuura. Kwemazera akasiyana, pane uremu hwakakodzera (kubva pa1 kusvika ku 1.4 kg).
Chikwereti chinofanira kutengwa maererano nezera remudzidzi. Iwe haufaniri kutenga chero humwe mushumo wepasi rose.
Rigid, zviri nani mapfupa kumashure, kuitira kuti arege kukuvadza kumira uye musana. Muchikwata chakanaka, panofanira kunge kune magetsi anokosha uye gorooves anoita kuti mwana arege kuputika kana achiupfekedza.
Kushandisa kushandisa uye kuenzanisa usinga. Icho chikamu chepamusoro hachifaniri kumira pamusana wemusoro, asi chikamu chepasi chinofanira kufambisa kumucheto kumashure.
Kana uri mudzidzi wechikoro chesekondari, zviri nani kusarudza wireframe knapsack nemakumbo mafudzi akazara, uye kune akwegura zvave kutokwanisika pasina gadziriro yakasimba, asi zvinoreva nekunze.
Mabhanhire acho anofanira kunge akareba masendimita 4-5, uye yakareba anenge masendimita makumi mashanu, kuitira kuti inogona kugadziriswa uye kugadziriswa. Ichave yakakosha kuwedzerwa mbatya shoma shoma kuitira kuti iwe unogona kuisa bhegi pachikwata.
Mvura isina mvura, yakagadzikana uye yakasvibiswa nezvinhu zvisingaiti. Zvakanaka kana pane pasi rakakosha rubberized kana mapurisa epurasitiki nekusvibiswa kuduku uye kupfeka.
Makamuri akawanda emakamuri mabhuku, mabhuku, mapeni, mabhodhoro emvura. Yakapfiga zviri nyore zvinyoro uye fasteners.
Iyo yakashongedzwa yepamusoro inofanira kunge iri tepi inofungidzirwa, uye ipapo zvidzidzo zvaunoda kuvakomana kana vasikana.
Zvose zvataurwa pamusoro apa zvichabatsira vabereki kusarudza kusarudza chikoro chechikoro kumwana wavo uye kuita kuti zvive zvakanaka, zvigadzirwa zvakanaka uye zvinoshanda.
Nekupi kupfeka jena jena?
Chii chaunofanira kuisa paNew Year's corporate - tips stylist
Rudzi rwemufananidzo "inverted triangle"
Photoshoot iri musango
Zvipfeko zvezviitiko zvinokosha
Nzira yekusarudza jasi remufananidzo?
Chimiro uye mafashoni zvakakwana
Photoshoot mumutauro weProvence
Mukadzi wekare wemusoro musoro
Vachapfeka muvhu kuitira vakadzi vane mafuta
Nzira yekuve mabhiriyoniirei?
Nzira yekubvisa tsvina kubva patare pazvipfeko - nzira dzinopupurirwa dzemidziyo yakakurumbira zvikuru
Kuroora kwechikwata kune vhudzi
Rice with chicken fillet
Denga dhema mumvura yekugeza
Amai amai-ve-pearl - magichu
Imam Bayalda - recipe
Kuberekwa pasina kuputika
Photosession pa bhiriji
Kereke yezororo munaNovember
Fritters pane kefir pasina mazai
Chechitatu haisi chakanaka: Vashandi vepa Instagram vakagumburwa murudo nemhuri yevanotora uye shamwari yavo cat!
Amber Hurd pasina makeup
Miti inopisa mafuta mumuviri
Manicure ane korona
Ombre yevhudzi shoma